‘एमालेसँग एक्लै लड्न कसैले पनि नचिताए हुन्छ’ – Karnalisandesh
‘एमालेसँग एक्लै लड्न कसैले पनि नचिताए हुन्छ’
प्रकाशित मितिः १२ भाद्र २०७८, शनिबार १७:५४ August 28, 2021
काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफनो पार्टीसँग एक्लै लड्ने आँट कसैले पनि गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले एक्लै लड्ने आँट नभएपछि सत्तारूढ गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर जाने तयारी गर्न बाध्य भएको तर्क समेत गरे। शनिबार नेकपा एमाले महालक्ष्मी नगर कमिटीले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेसँग एक्लै चुनाव लडन कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले नसक्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको दाबी समेत गरे।
आगामी निर्वाचनमा एमालेविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘म सुन्दैछु– मोर्चाबन्दी गर्छन् रे। एमालेसँग एक्लै लड्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। एमालेसँग एक्लै लड्न कसैले पनि नचिताए हुन्छ। एमालेसँग एक्लै लड्न कोही सक्दैन–सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मिलाउने अरे, मिलेर लड्ने रे।
एक एक दर्जनको १० वटा पार्टी मिल्यो भने कति हुन्छ ?१० दर्जन जति नै त भयो होला नि, होइन रु एकरएक दर्जन मान्छे भएको १० वटा पार्टी मिल्दा। १० दर्जन भनेको १ सय २० होइन ? १२० जनाको मोर्चा कसेर एमालेसँग लड्ने ? माधव नेपालका नक्कली नाम समेत जोड्दा, दोहोरिएका समेत जोड्दा ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ जना सांसद त्यतिजना मिलेर एमालेसँग लड्ने? उहाँहरू कुरामा लड्न सक्नुहुन्छ। काममा होइन, मैदानमा होइन, व्यवहारमा होइन।’
अध्यक्ष ओलीले जनादेशबाट नभई विभिन्न जालझेल गरेर आफूहरूलाई सत्ताबाट हटाएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यसको जवाफ दिनेगरी तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। विचार नभएको, देशको विकास भनेको के हो ? भन्ने थाहा नै नभएकाहरू सत्तामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता षडयन्त्रकारीहरूलाई आफ्नो पार्टीले निर्वाचनबाटै एकमुष्ट जवाफ दिने बताए।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी जनादेशबाट सरकारबाट हटाइएका होइनौं। जालझेलबाट सरकारबाट हटाइएको हो। चुनाव त आओस् नेकपा एमालेले जवाफ दिनुपर्छ यी सबै कुराहरूको। यी सबै खुद्रा षडयन्त्रको एकमुष्ट जवाफ दिनुपर्छ एमालेले।’ अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालहरूलाई एकरदुइटा कपालको केशको संज्ञा दिँदै उनीहर हिँड्दै टाउँको मुडुलो नहुने बताए।
उनले भने, ‘नुहाउँदाखेरी एक, दुइटा कपालको रौं झर्छ। जति दामी साबुन लगाए पनि, राम्रो, ब्रान्डेड साबुन लगाए पनि, छानेको पानीले नुहाए पनि, जेसुकै गरे पनि एक, दुइटा कपाल झर्छ। एक, दुइटा कपाल झर्दैमा टाउको मुडुलो हुन्छ?’